सिटिजन्स् बैङ्क इण्टरनेशनल | गृहपृष्ठ
Home लगानी सिटिजन्स् बैङ्क इण्टरनेशनल
सिटिजन्स् बैङ्क इण्टरनेशनल
वर्गीकरण : वाणिज्य बैङ्क
मुख्य कार्यालय : कमलादी, काठमाडौं
स्थापना : २०६४ वैशाख ५
अध्यक्ष : कुलचन्द्र गौतम
सीईओ : राजनसिंह भण्डारी
शाखा कार्यालय : ३२
संस्थापक शेयर : ७० प्रतिशत
सर्वसाधारण शेयर : ३० प्रतिशत
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका भूपू सचिव तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यो बैङ्कको स्थापना भएको हो । व्यवस्थापन पक्ष निकै बलियो रहेको यस बैङ्कमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमै ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नता छ । २०६४ वैशाख ७ देखि वित्तीय कारोबार गर्दै आएको यो बैङ्कले छोटो समयमा देशका विभिन्न स्थानमा शाखा खोली वित्तीय कारोबार गर्न सफल भएको छ । स्थापनाको १ वर्ष१० महीना अर्थात् २०६५ माघ २६ गते बैङ्कले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ३० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको थियो । आव ०६६/०६७ को मुनाफा तथा सञ्चित नाफाका आधारमा गतवर्ष बैङ्कले शेयरधनीहरूलाई १२ दशमलव ६३ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आव ०६७/६८ को मुनाफाका आधारमा लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफल भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, बैङ्कको वित्तीय विवरणअनुसार यस वर्षपनि लगानीकर्ताले न्यूनतम १० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यो बैङ्कको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यसको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । आरएसआई चार्टको चालअनुसार यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा उतारचढावको अवस्था देखिन्छ । गत जुलाईको मध्यतिर स्केल ३० लाई छोएको यस बैङ्कको आरएसआई रेखा अहिले पनि स्केल ४५ भन्दा माथि जान सकेको छैन । यसको आरएसआई रेखा हाल स्केल ३१ मा घट्दो अवस्थामा देखिए पनि तत्कालै टेवा पाउने सम्भाना बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा यसको शेयरमूल्यमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले यस बैङ्कको शेयर विक्री गर्नेहरूका लागि केही समय कुर्नु उपयुक्त हुन्छ भने खरीदकर्ताहरूका लागि अहिले खरीद गर्ने उपयुक्त समय आएको देखिन्छ ।
आव ०६७/६८ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणसम्ममा यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब रहेको छ । साथै, आव ०६७/६८ मा यस बैङ्कले रू. १९ करोड ८३ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको भन्दा २ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी बैङ्कको जगेडा कोष अघिल्लो आवको तुलनामा २ सय ३८ दशमलव १८ प्रतिशतको उच्च दरमा वृद्धि भएर हाल रू. ३४ करोड २६ लाख पुगेको छ । खुद नाफामा खासै वृद्धि नभए पनि जगेडा कोषमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले गर्दा लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रतिफल पाउने सम्भावनालाई बढाएको छ । साथै, गत आवमा बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन ५ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेर रू. १३ अर्ब ४७ करोडमा सीमित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानी पनि अघिल्लो आवको तुलनामा १० दशमलव ३९ प्रतिशतले कम भएर हाल रू. १ अर्ब १२ करोडमा पुगेको छ । तर, ऋण प्रवाहतर्फ भने १४ दशमलव ५४ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. १२ अर्ब ५१ करोड पुगेको बैङ्कले बताएको छ ।
वार्षिक शेयर कारोबार :
• यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नियमित कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्तालाई चाहेको समयमा किनबेच गर्न केही समस्या पर्दैन । यसले गर्दा आफूले चाहेको समयमा बजारमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन कुनै समस्या पर्दैन । साथै, कम्पनीको शेयरमूल्यमा आउने उतारचढावको अवस्थामा सट्टेवाजहरूले यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी सामान्य मात्रामा मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
• गतवर्षको तुलनामा यो वर्षबैङ्ककोे चुक्ता पूँजीमा लगभग ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, खुद नाफा भने २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्धि भएकाले यो वर्षको लाभांश दरमा केही कमी आउने देखिन्छ । तर, जगेडा कोषमा देखिएको वृद्धिले गर्दा यो वर्षपनि बैङ्कले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई न्यूनतम १० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने सम्भावना छ ।
• हाल शेयरमूल्यमा निकै ह्रास आएकाले यो बैङ्कको शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ताहरूले छोटो समयमा नै लगभग १० प्रतिशत नगद लाभांश पाउने सम्भावना छ । सो प्रतिफल बैङ्क निक्षेपमा प्राप्त हुने ब्याजभन्दा बढी हो ।
• बैङ्कका प्रमुख वित्तीय परिसूचकमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । चुक्ता पूँजी र मुनाफाको वृद्धिदरमा ठूलो भिन्नता रहेकाले बैङ्कको प्रतिशेयर आय र मूल्य-आम्दानी अनुपातमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । हाल बैङ्कको प्रतिशेयर आय रू. ९ दशमलव ९२ र मूल्य-आम्दानी अनुपात २२ दशमलव ३८ गुणा रहेको छ । हिजो बुधवारको कारोबारअनुसार यो बैङ्कको शेयरमूल्य रू. ९ ले घटेर रू .१ सय ९९ मा बन्द भएको छ ।
ज्याम् टेक्नोलोजिज प्रालि